Sarimihetsika fanamboarana herinaratra nomanina karatra IC
Fizarana 1: Fandaharana ankapobeny 1.Background Ny rafitra lozisialy dia rafitra fitantanana lehibe. Ny fitantanana ny fanjifana herinaratra amin'ny orinasa, dormitory ary trano dia lehibe ao anatin'izany. Fangalarana herinaratra, jiro mitete, ary manapotika herinaratra ao amina orinasa, asompsy, a ...
Ny fahatsinjovana ho an'ny herinaratra herinaratra vita amin'ny herinaratra
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana eo amin'ny fiaraha-monina, nalaina ny vokatra antsoina hoe metatra angovo prepaid, izay tsy vitan'ny hoe mampihena ny volan'ny herinaratra an'ny mpampiasa any amin'ny faritra sasany, fa koa manome fahafaham-po ny rafi-pahefana ary miaraka amin'izany miaro tsara ny fiarovana ny herinaratra. Avy eo, inona no ...
fanaraha-maso ny angovo "tompon-trano"
Ankehitriny orinasa dia manandrana fomba isan-karazany mba hanatsarana ny fitrandrahana angovo sy hampihenana ny vidin'ny famokarana. Ohatra, ny fitantanana herinaratra nentim-paharazana dia mampiasa fomba fiasa mba handikana sy handaminana, izay manana olana toy ny tsy fitoviana malemy, fahamoram-potoana ambany, ary sarotra ny fitantanana. Ahoana no tena fotoana ...